घरबाट किन भाग्छन् महिला ? |
घरबाट किन भाग्छन् महिला ?
प्रकाशित मिति :2016-01-28 15:05:48
कैलाली । कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिका १२ मा हिरा चौधरी सामान्य मजदुरीले घरचुलो चलाउँदै आएकी थिइन् । माइतीमा सुख सहेल देखेर वैवाहिक जीवन अँगालेकी हिरा विवाह पश्चात् पनि दाम्पत्य जीवन सुखद् बनाउन हरप्रयास गरिन् ।
दिनभर मजदुरी र साँझ विहान घरमेलो चलाउनु उनको लागि फलामको चिउरा थियो । आखिर जीन्दगीको यात्रा सहज र सरल बनाउन यति सानोतिनो दुःख नगरि पनि सुख थिएन । त्यसैले उनी दैनिक ज्यालादारी मजदुरीमा काम गर्न बजार जान्थिन र मजदुरीबाटको आम्दानीबाट खर्च चलाउँथिन् ।
विवाह पश्चात्को दाम्पत्य जीवनकाे सुख दुई सन्तानको जन्मसंगैै किनारा लागि सकेको थियो । श्रीमान तेज चौधरीले मदिरा सेवन गरेर गाली गलौज र कुटपिट गर्न थालेपछि उनको दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै गयो । एक दिन उनले दुई सन्तान र श्रीमान समेत छोडिन् । श्रीमानलाई चेतावनी दिन केही समय बाहिरै बस्ने उनले निर्णय गरिन् ।
घरमा दिनहुँको तनावले वाक्क भएकी हिरा कुनै सुइको नै नदिएर बैतडीको पाटनमा काम गर्न पुगिन् । हिरा घरबाट हिडेपछि श्रीमान तेजको बिल्लीबाँठ भयो । आफन्त चारैतिर खोजतलास गरे । कतै फेला नपरेपछि २०७२ साल असोज १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा खोजतलासको लागि निवेदन दिए ।
प्रहरीकोमा निदेवन दिएपछि हराएको ३५ दिनमा हिरा र तेजको सम्पर्क भयो । एक आपसमा भएको समझदारीपछि मिलन भयो । श्रीमानलाई सुघार्न घर छाडेको बताउँने उनी फेरी पनि श्रीमानको आचरणमा सुधार नआएको देख्दा झन् चिन्तित बनेकी छिन् । ‘सधैको कुटाई सहन नसकेर,सुध्रिन्छ की भनेर वेखर भएर बैतडी बसे । ३५ दिनमा उसलाई फोन गरे, लिन आयो र घरमा आएँ । अब त सुध्रिए होलान भनेको फेरी पनि उस्तै छ ।’ हिराले भनिन् ।
कैलालीको उदासीपुर २ की लक्ष्मी सिंहको १६ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लक्ष्मीको परिवारले धनगढी मिलनचोकमा खानदानी परिवारको केटा भेटाएपछि कक्षा ९ पढ्दै गरेकी छोरीको हात सुम्पिए ।
धनी परिवार भएपनि छोरीले सुख सहेल मात्रै होइन शिक्षा, रोजगारका अवसर पनि पाउँने छन् भन्ने लक्ष्मीका माइतीले सोचेका थिए । र, लक्ष्मीको बाँकी पढाइ आफैले गराउने केटा पक्षको प्रतिवद्धतापछि विवाहका लागि लक्ष्मीको परिवार राजी भयो ।
विवाहपछि मात्रै धनी घरको विग्रेको ज्वाइँ फेला परेको चाल पाएपछि अहिले लक्ष्मीको माइती निकै तनावमा छ । ‘राम्रो खान्दान भनेर विवाह गरिदिएका थियौ ।’ लक्ष्मीकी भाउजू मालति सिंहले भनिन् ‘केटाले लागुप्रदार्थको दुव्र्यसनीमा फसेको रहेछ । उसले नन्द(लक्ष्मी)लाई पढाउनुको साटो राम्रो व्यवहार समेत गरेन ।’ लक्ष्मी अहिले केटाको घरबाट वेपत्ता भएकी छिन् । आफ्नो नन्द हराएको निवेदन मालतिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०७२ साल भदौ ८ गते दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म फेला नपर्दा माइती पक्ष निकै चिन्तित छ ।
लक्ष्मीमाथि घरेलु हिंसा भइरहेपनि वेइज्जत हुने डरले घरमै छलफल गरी अवदेखि राम्रो व्यहार गर्ने सहमति गरिएको मालतिले बताइन् । कहीँ कतैबाट लक्ष्मीको बारेमा जानकारी नआएको बताइन् । कैलालीबाट विगत लामो समयदेखि महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम बढेपनि प्रहरी भने नियन्त्रण र खोजविनमा असफल जस्तै देखिएको छ । धेरैजसो मानिसहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने अनुमान समेत प्रहरीले लगाउन सकेको छैन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा महिला हराएको निवेदन परेपछि खोजलतासमा भने खासै प्रगति भएको छैन् । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत ४ वर्षको अवधिमा लक्ष्मी सिंह जस्ता ३ सय ९३ महिला हराएको सूचिमा छन् । ती मध्ये हालसम्म ८३ जना महिला मात्रै फेला परेका छन् ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चालु आवकोे ७ महिनामा ५४ जना महिला हराएका निवेदन परेको छ । त्यसैगरी बालिका १० जना र बालक १३ जना हराएका छन् । वेपत्ता सूचिमा रहेका मध्ये हालसम्म ४ महिला,३ बालक ३ बालिका फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलकी प्रहरी निरीक्षक शैलेश्वरी बोहोराले बताइन् ।
प्रहरी निरीक्षक बोहोराले सुदुरपश्चिममा रक्सीको कारण घरेलु हिंसा बढेकाले महिला घरेलु हिंसा सहन नसकेर दोस्रो विवाह गरेर गएका छन् भने कोही ज्यान जोगाउन बाहिर काम गर्न जाने गरेको बताइन् ।
‘घरेलु हिंसाका कारण नै बढी महिला हराउने निवेदन परेको छ, हामीले भेटिएकाहरूमा बुझ्दा श्रीमान्ले मादवप्रदार्थ सेवन गरेर कुट्ने भएकाले अर्को विवाह गरेर गएको बताउँछन् ।’ निरिक्षिक बोहोराले भनिन् ‘घरमा श्रीमान रक्सि खाने,आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा काम गर्ने बाहिर जान्छन् महिला हराएको भनी निवेदन दिन्छन् ।’
बोहोराले धेरैले महिला तथा बालबालिका भेटिएपछि घर परिवारले प्रहरीलाई जानकारी नगराउने, प्रहरीलाई दिएको मोबाइल नम्बर गलत,फोन नलाग्न जस्ता समस्याले फेला नपरेकाहरूको सख्या बढी देखिएको बताउँछिन् ।